Cabdiraxmaan Cabdillaahi Adam | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Iftiimin guud: Sebenkan maanta aynu joogno dhalinyarada iyo jiilasha haatan soo kacaamaya, waxa aan ku baraarujin lahaa oo kala talin lahaa in ay dhugmo dheeraad ah u yeeshaan oo aanay ku kadsoomin Dukamantariyada iyo Aflaamta loo eekaysiiyo qaar cilmi iyo nadariyaad ku dhisan. Dhammaantoodna hal mid ayay ka siman yihiin ama sheegaan; waxaana ka mid ah: Bini’aadamku waxa uu u egyahay daanyeerka. Bini’aadamku berigii hore waa uu qaawanaa sida xayawaanka kale. Bini’aadamku tadawur (Evolution) ayuu sameeyay si uu muuqan maanta uu yahay oo kale u yeesho. Bini’aadamku dabshidkii iyo xilligii Casru Jaahiliga waxa ay ku wada hadli jireen faraha (hadal …
Ilbaxnimadii MAAYA ee burburtay! Ilbaxnimo waa xaddaarad iyo waayaheed. Duni kasta iyo bulshooyinka ku nooli waxa ay leeyihiin xaddaarad iyo ilbaxnimo u gaar ah oo ay ku tanaadeen. Ilbaxnimooyinkaasi qaarkood way tisqaadeen, qaarkoodna way burbureen oo baaba’een. Kuwaas tisqaaday badhkood waxa ka dhashay dawladaha iyo dalaka reer galbeedka maanta la odhan karo ilbaxnimo iyo haldoornimo waa loo daayay. Haddaba maanta waxa aynu is weyddiin doonaa ilbaxnimooy maxaad tahay? Ilbaxnimadu ma burburtaa? Ma jiraan ilbaxnimooyin burburay? Waa su’aalahaas iyo qaar kale oo badan oo aynu qormada tan kaga jawaabi doono. Inkasta oo ilbaxnimooyinkii dunida soo maray ee haddana galbaday ay badan …
In the present, the cultural and religious climate in the Somalis as well as other parts of the region are affected by retrograded and old model customs and believes which seems to be an antithetical approach to the understanding of the nature of the world. Somali population which mostly settles horn of Africa esp. Somalia has been under broad turmoil and feud around three decades is now turning in to a society whose entire existence and heritage seems to be debilitating. This prolonged political chaos in Somalia has not influenced only governance and stability but has also retarded the pivotal …
Health sector is one of the most essential life sustaining principles in human life and devoid of it human being wouldn’t exist. A healthy individual shape and delivers the outcome of a complete and a well-oriented society. As a result, better health is fundamental to human happiness and safety. It also makes an important contribution to economic progress, as healthy populations live longer, are more dynamic, and save more. Numerous factors manipulate health status and country’s ability to provide valuable health services for its people. Ministries of health are significant actors, but so are other government sectors, donor associations, civil …
Waa qalliin loo ballansanaa in la hirgeliyo 2015-kii, illaa 2017-kii, balse illaa haatan aan suurto gelin. Waxa qalliinkii ka cudur daartay ninkii lagu sameyn lahaa oo sababo isaga u gaar ah uga baaqday. Waana ninka taswiirta idiin ka muuqda oo ah Valerie Sprinidov, Ahna khabiir xagga koombiyuutarada ah, una dhashay waddanka Ruushka. “The impossible of today, is the possible of tomorrow” ~ Bertrand Russel “Waxa maanta suurto geli waaya, berrito ayay suurtogaleyaan” Hayaanka iyo haybinta la gobyaalayo aqoonta ku duugan kawnka iyo daah-ka-rogista asraarta uunka iyo aadanuhu waa mid weli socota, maalin kastana talaabo cusub ayaa hore loo qaadaa.!! Waxa …
Maanta waxa aan idin la wadaagayaa dhowr sheeko oo xikmadaysan.! Gabadh ayaa maalin maalmaha kamid ah soo booqatay saaxiibaddeed oo cunto karinta si heersare ah u taqaannay, si ay uga barato habka loo moofeeyo kalluunka kaddibna waxa ay aragtay iyada oo kalluunkii madaxa iyo dibka ka goynaysa; dabaddeed, waxa ay warsatay sababta ka danbaysa?! Itaal-baaska gabadhii waxa ay ku tidhi: “garan maayo, aniguba hooyaday baan ka arkay!” Isla goobtii ayay hooyadeed wacday, wayddiisayna sababta ay kalluunka madaxa iyo dibka uga goyn jirtay?! Hooyadeedna waxa ay ugu warcelisay: ” ‘bi’i waaye, ma anaa garan?!’aniguba islaantii i dhashay, ayaa sida tan suubbin …
Waa maxay nasiibku? Waa weyddiin iyo fal-celinteedi.! Nasiib muxuu yahay? Dadku ma isku wada nasiib baa? Nasiibka iyo qaddarka maxaa u dhaxeeya? Nasiibka ma lagu hungoobaa? Waa weyddiimahaas iyo qaar kale oo badan oo aynu kaga warrami doono qormada tan. Haddii aynu ku bilaabano, sannaddii 1992-dii, nin la odhan jiray Arkie Karas, oo ahaa muddalab ka shaqeeya mid ka mid ah hudheelada waaweyn ee Maraykanka, ayaa tegay magaalada Las Vegas. Sannaddii 1995-tii konton dollar oo uu haystay waxa uu u beddelay 40 million oo dollar. Waxa uu noqday rikoodhkana ku dhigay guulaystihii ugu layaabka iyo nasiibka badnaa abid ee soo …
Eike Fuhrken Batista da Silva, waa hantiilihii iyo milyaneerkii reer Brazil. Hantidiisa waxa lagu qiyaasi jiray ku dhowaad 40 billion oo dollarka Maraykanka ah. Waana ninkii yidhi: “haddii hal Milyan oo dollar dhulka igaga dhacdo, lagama yaabo in aan raadiyo – wakhtina kulumiyo ee waan iska dhaafi lahaa. Sida ay shaacisay warbaahinta Forbes ee ka faalootaa arrimaha maal-qabeenada, waxa ay tibaaxday in Batista da Silva yahay ninka siddeedaad ee ugu taajirsan dunida. Halka uu noqday ninka ugu taajirsan qaaradda Koonfurta Ameerika iyo Brazil. Waxa uu ka ganacsan jiray macdanta, saliidda iyo dahabka. Haddaba arrinta mucjisada iyo amakaaga leh waxa ay …
Ishaarooyinka jidhka [= Body languages] Bilmatal haddii aynu isku dayno in aynu qof darisno ama u kuurgalno waxa uu dareemayo ee laabtiisa ku jira (Inkasta oo Eebbe weyne yahay ka keliyaata ee ogsoon waxa qarsoon); waa in aynu eegnaa oo dhawrnaa ishaarooyinka ay bixinayaan jidhkiisu oo ah waxa loo yaqaan (Body languages). In la derso xaaladda qof ku sugan yahay ama la la socdo ishaarooyinka jidhkiisa iyo dareemayaashiishu bixinayaan waa kuwo adduunka si weyn loogu kuur galo. Waa barta iyo barada ay ka shiidaal qaataan culimada baadha denbiyada iyo gabood fallada (Forensic Criminology). Marka aad damacsan tahay in aad qof …
Jillaagii caanka ahayd ee reer Masar ee lagu magacaabi jiray Wadiid Xamdi ayaa wada wadal dhex maray isla jillaagii kale ee la odhan jiray Kaamiiliya, xilli ay kuguda jireen jillida filimka caanka ah ee lagu magacaabo: ” ﺮﻤﻗ14 “. Waxa ay ku tidhi Eebbe waxa aan kaaga baryayaa in aad dhimatid adiga oo gubanaya. Tii kalena waxa ay ugu jawaabtay, adna waxa aan Illaahay kaaga baryayaa in aad dhimatid adiga oo Mindi wadnaha kaaga jirto. Haddaba waxa layaabka ah ayaa waxa ay tahay in Wadaad Xamdi ay dhimatay iyada oo gubanaysa kaddib shil diyaaradeed oo dhacay dabshidlii1950-kii. Halka Kaamiiliya iyaduna …